I-Lavender izalwa e-Western nase-Asia Ephakathi, eYurophu, eMedithera naseNyakatho Afrika. Kulesi siqondiso sizobhekana nezinhlobo ezimbili eziyinhloko ezisetshenziselwa ukukhiqizwa kwamafutha abalulekile ekusetshenzisweni kwezidakamizwa nokugcoba. Okuthiwa i-lavender yangempela noma i-English lavender kanye nama-Lavandin.
Igama elivamile: Lavender, True Lavender noma I-Lavender yesiNgisi
Igama elivamile: Lavandin
Isitshalo se-lavender singumkhawulo okhula kuze kube ngu-1200 mm ukuphakama futhi sekuyisikhathi eside, i-spike efana, amaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka anemiphetho encane encane efinyelela cishe ku-40 kuya ku-50 mm ubude. Lesi sitshalo sikhiqiza amagatsha amaningi ohlangothini ukuze senze isihlahla. Izimbali ezisezincebeni zamagatsha esiqenjini se-cylindrical ziluhlaza okwesibhakabhaka kuya kumbala we-lilac obomvu. I-Lavandin ingumlimi okhulayo kakhulu futhi iveza izimbali eziningi kune-English lavender.
I-lavender isetshenziswa ngokuyinhloko ngamafutha ayo abalulekile. Konke i-kilogram ye-lavender entsha yesiNgisi efaka inqubo yokucwiliswa kwezidakamizwa ngama-milliliters angu-5 kuya kwangu-8 amafutha abalulekile akhiqizwa. Lapho amaLavandini ehlanjululwayo akhiqiza cishe kabili amafutha kodwa ngephunga elidakayo ngokwemikhiqizo yalo ephakeme ye-camphor.
Amafutha abalulekile e-English Lavender ahlonishwa yimbonini yamafutha ngenxa yephunga elimnandi. Amafutha we-lavender asetshenziselwa imithi njenge-antiseptic ne-anti-bacterial agent. Amafutha ayenjengezinambuzane eziphihliwe nezinambuzane futhi asetshenziselwa i-aromatherapy. Amafutha asetshenziselwa ukuba abe yi-agent ye-flavoring yi-industry kanye nezimboni.
I-lavender nayo ingasomiswa njengendlela ephunga elimnandi futhi njengamalungiselelo ommbali omisiwe.
I-Lavender ikhula emhlabathini owodwa kodwa ikhula kahle kunesihlabathi esineqhwa elihle kakhulu ukuze inhlabathi ibe yensimu nge-pH ephakathi kuka-6.0 no-8. I-Lavender yangempela ikhula kahle emhlabathini owodwa we-alkaline kanti i-Lavandin ikhetha i-pH ephansi, inhlabathi encane e-acidic. Ngaphambi kokuba kwenziwe ukulungiswa kwenhlabathi kwenziwa isampula yomhlabathi okumela kufanele ithathwe futhi ithunyelwe ebhokisithri ukuze kuhlaziywe kanye nezincomo zezakhi. I-Lavender inezimpande ezincane ezingajulile futhi izimpande zayo azivami ukuba zikhule ngokujulile kunezingu-300 mm.
Umhlabathi kufanele udonswe ukuze ukhulule iphrofayli yomhlabathi ibe ngu-400 mm ukuqinisekisa ukudonsa okuhle. Lungisa amazinga we-pH ngokungeza i-lime uma inhlabathi i-acidic futhi ingeza umquba noma umquba. Pula ungene emhlabathini ophezulu wama-300 mm cishe amasonto amane kuya kwahlanu ngaphambi kokutshala. Ezinsukwini zokugcina ngaphambi kokutshala, faka izici zokulandelela kanye nomanyolo olinganiselayo wokutshala umhlabathi emhlabathini futhi ungangeni emhlabathini ophezulu ka-20 cm. Lokhu kuzosusa nanoma yikuphi ukhula okungase lubekwe. Faka ukuchelela futhi uma kuhlanganiswa lokhu kuzokwenzeka manje bese utshala izithombo.
I-Lavender isitshalo esivame ukutshala esikhula ezindaweni ezifudumele zaseMedithera futhi yenza okuhle kakhulu emazingeni okushisa aphakathi kuka-20°C no-28°C. I-lavender ingatshalwa ezindaweni ezimile lapho okungenani kunamaphesenti ama-500 emvula esakazeka ngaphezu konyaka, nakuba yenza kahle kakhulu ngaphansi kokunisela okunamandla okuqhubekayo. Ikhula eduze nendawo yolwandle kodwa ingcono kakhulu ezindaweni eziphakeme lapho ezinye zikhula ngaphezu kwamamitha angu-1500 ngaphezu kolwandle. Amazinga okushisa aphezulu kakhulu ayithinta kabi izinga lokucwilisa nezimbali.
Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko ze lavender ezikhiqizwa ngokuthengisa. Abakhiqizi beqiniso noma be-English abakhiqiza izimbali ezincane futhi ezincane, kodwa ikhwalithi engcono, amafutha namaLavandini, okuyi-hybrid futhi akhiqiza izimbali eziningi namafutha abalulekile ngehektare. Amafutha we-lavender angcono futhi athengisa ngamanani aphezulu.
Kunezinhlobo eziningi ze-lavender ngakho-ke lapho ukhetha okutshalayo kungcono ukuthola iseluleko se-extension officer yangakini kanye nochwepheshe bezokukhiqiza ngezinhlobonhlobo ezingcono kakhulu endaweni yokukhiqiza nangenhloso kanye nemakethe okuhlosiwe.
Izinhlobonhlobo ezidumile zesiNgisi noma zeLavender ziyi: Hidcote, Munstead, uJean Davis noVera abaziwa kakhulu.
Izinhlobonhlobo ezidumile ze-Lavandin yi-Abriali, i-Dutch Mill, i-Grappenmall, i-Grosso, i-Provence, i-Seal ne-Super